Mugodhi, wokuisira, chokurukisa
Vamwe CNC Lathe machine
Ring, Circle, chipika Flange uye Gasket
CNC Lathe machine Computer kusanganiswa Control kana CNC Lathe michina inoshandiswa kugadzira zvikamu nokuchinja shamhu mashoko akasarudza uye kudyisa siyana nokuveza Ezvemutauro kupinda zvinhu panguva kunosiyana pakadzika uye pamakona. michini Izvi anotibvumira kubereka chaiwo chaizvo zvikamu shoma kana pasina kugadzira yechipiri. Main Products simbi Our lathe wekushanduka midziyo uye noruzivo CNC lathe machine tikwanise zvinodiwa zvakawanda vatengi zvikumbiro. Kwava kugadzira preci ...
Computer kusanganiswa Control kana CNC Lathe michina inoshandiswa kugadzira zvikamu nokuchinja shamhu mashoko akasarudza uye kudyisa siyana nokuveza Ezvemutauro kupinda zvinhu panguva kunosiyana pakadzika uye pamakona. Michini Izvi anotibvumira kubereka chaiwo chaizvo zvikamu shoma kana pasina kugadzira yechipiri.
simbi Our lathe wekushanduka midziyo uye noruzivo CNC lathe machine tikwanise zvinodiwa zvakawanda vatengi zvikumbiro. Kwava inobereka zvakarurama simbi pamwe diameters duku se 0,012 "(0.31 mm) uye urefu sezvo pfupi se 0,032" (0.81 mm), redu midziyo inogona kutakura yakareba kusvika 12 "(304.8 mm) uye diameters anosvika 12" (304.8 mm).
Tinoshandisa yedu multi-chinangwa lathe michina uye CNC zvirongwa unyanzvi kuumba inofa pamusoro zvitarisiko, kubva nyore kune zvakaoma uye kusanganisira cylindrical uye conical zvitarisiko. Nokuti zvakarurama nokubviswa simbi, redu unyanzvi machinists kushandisa inoshamisa siyana unyanzvi uye dzedu kusanduka turret slant mubhedha lathe ane 12-nzvimbo turret kuzadzisa zvakawanda chikamu zvinhu. Izvi zvinosanganisira (asi hakugumiri) achitendeuka, hakunakidzi, kuchera, threading (zvose zvemukati uye zvokunze), womukati tapping, grooving, chiso grooving, divi pakona, vafambi, akatarisana, knurling, akacheka-kure, chamfering vakagovana kure, uye radiusing.
CNC lathe machine anogona akaita zvitarisiko izvi zvakafanana mapikicha akaratidza, Uyewo, nemazvo CNC wedu lathe Machines yave machine zvakarurama chidimbu mativi uye kupa rubatsiro ukoshi-akawedzera kuti Aerospace, kukurukurirana, zvokurapa, zvemagetsi uye mamwe maindasitiri akaita seenyu.
Previous: Shongwe, Pin
5d cnc machine Center
Chiwanikwa Glass Fastening screws
Aluminum 7075 Junction Box CNC hwokugaya hwakabvira Service
Aluminum cnc machine psac Parts
Cnc Auto Parts hwokugaya hwakabvira Parts
Cnc machine psac Aluminum Parts
Cnc machine psac Teflon Parts
Cnc machine Electronic Equipment Parts
Cnc machine Impeller
Cnc machine Machine Part
Cnc machine Part For Production Equipment
Cnc machine Turning Part
Cnc hwokugaya hwakabvira Custom Service
Cnc hwokugaya hwakabvira Electronic Equipment Parts
Cnc nemazvo Aluminum
Cnc nemazvo Part
Cnc Rakauya Parts
Cnc Yokuchinja Hardware Parts
Cnc Turning machine Aluminum Parts
Custom nemazvo machine
High Raidiwa cnc machine Parts
Metal cnc hwokugaya hwakabvira
Mini cnc hwokugaya hwakabvira
Nonstandard the bushing Manufacturer Kuendesa High-Quality machine psac Parts
Oem Metal Turning Lathe Part CNC machine
Namazvo cnc machine
Nemazvo Aluminum machine
Nemazvo cnc machine psac Parts
Nemazvo Lathe machine psac Rwomukati Ring Parts
Nemazvo Lathe machine psac Pistion Ring Parts
Achitendeukira Metal Parts
Used cnc Vertical machine Center